वरिष्ठ नेता पौडेल र भारतीय रक्षामन्त्रीको भेट - नेपालबहस
वरिष्ठ नेता पौडेल र भारतीय रक्षामन्त्रीको भेट
१ माघ, काठमाडौं । स्वास्थ उपचारका लागि भारतको नयाँ दिल्ली पुगेका नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आज भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेटवार्ता गरेका छन् । दुई नेताबीच नेपाल भारतका विविध पक्षमा कुराकानी भएको आजको इण्यिन एक्सप्रेस अनलाईनले जनाएको छ । स्वास्थ उपचारका लागि नेता पौडेल गत सोमबार दिल्ली उडेका थिए ।
भारतीय जनता पार्टीका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका सिंहसँगको भेट राजनीतिक रुपमा अर्थपूर्ण मानिएको छ । इण्यिन एक्सप्रेसको अनलाइन संस्करणमा दुबै नेताबीच सामान्य भलाकुसारी भएको लेखेको छ । नेता पौडेल र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पार्टीको आगामी महाधिवेशनको कार्यतालिका लगायत विभिन्न विषयमा विवाद बढेको छ । नेता पौडेल भोलि स्वदेश फर्कने पनि समाचारमा जनाइएको छ ।
पौडेलको समूहद्धारा देउवाविरुद्ध विरोधपत्र दर्ता, २७ केन्द्रीय सदस्यकाे हस्ताक्षर ३ दिन पहिले
देउवाविरुद्ध मोर्चाबन्दी शुरु, पौडेल र सिटौलाबीच छलफल ४ दिन पहिले
देउवाको चाल, पौडेलको ढाल ! काम लाग्ला त कांग्रेस बचाउन ? १ हप्ता पहिले
बीपीप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली ३ हप्ता पहिले
सभापति देउवाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रदै पौडेल समूह ४ हप्ता पहिले
विषम स्थिति सर्जकका लागि अवसर पनि हो : कुलपति उप्रेती १ मिनेट पहिले
कोटेश्वरका व्यापारी हत्याकाण्डको मुद्दामा पुनः सुनुवाइ हुने ४ मिनेट पहिले
ढोरपाटनका बाढीपहिरो पीडितलाई प्रभु बैंकको ५ लाख सहयोग २७ मिनेट पहिले
यी हुन् असोज १५ गतेका मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु २८ मिनेट पहिले
भारतबाट आयातीत विषाक्त रसायनयुक्त माछाको बिक्रीमा रोक ३४ मिनेट पहिले
भोजपुरमा वास्तविक कृषकसम्म पुगेन राज्यको अनुदान ३८ मिनेट पहिले
बिना धितो कुमारी बैंकको आकर्षक मार्जिन लेन्डिंग कर्जा योजना ४२ मिनेट पहिले
स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना पुष्टि भएपछि सेवा बन्द ४२ मिनेट पहिले
कर्मचारीलाई कोराेना पुष्टि भएपछि सेवा प्रभावित ४८ मिनेट पहिले
भजनीका १५ स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना पुष्टि, नपाका सेवा बन्द ५१ मिनेट पहिले
भक्तपुरमा कोरोनाबाट सप्तरीका एक पुरुषको मृत्यु ५३ मिनेट पहिले
यमुना द्रुतमार्गबाट भारतीय कांग्रेसका दुई शीर्ष नेता गिरफ्तार ६० मिनेट पहिले
मृगौला स्वस्थ्य राख्ने यस्ता छन् १० उपाय [ थाहा पाउनुस ] १ घण्टा पहिले
विषम स्थिति सर्जकका लागि अवसर पनि हो : कुलपति उप्रेती २ मिनेट पहिले